Zibhalo E zingcwele: UNehemiya / Nehemiah 10
1 Abo ke bawutywinayo: nguNehemiya irhuluneli, unyana kaHakaliya, noZedekiya,
2 noSeraya, noAzariya, noYeremiya,
3 noPashure, noAmariya, noMalekiya,
4 noHatushe, noShebhaniya, noMaluki,
5 noHarim, noMeremoti, no-Obhadiya,
6 noDaniyeli, noGineton, noBharuki,
7 noMeshulam, noAbhiya, noMiyamin,
8 noMahazeya, noBhilegayi, noShemaya; abo ngababingeleli.
9 AbaLevi: nguYeshuwa unyana ka-Azaniya, noBhinwi koonyana bakaHenadade, noKademiyeli.
10 Nabazalwana babo: nguShebhaniya, noHodiya, noKelita, noPelaya, noHanan,
11 noMika, noRehobhi, noHashabhiya,
12 noZakure, noSherebhiya, noShebhaniya,
13 noHodiya, noBhani, noBheninu.
14 Iintloko zabantu: nguParoshe, noPahati wakwaMowabhi, noElam, noZatu, noBhani,
15 noBhuni, noAzegadi, noBhebhayi,
16 noAdoniya, noBhigvayi, noAdin,
17 noAtere, noHezekiya, noAzure,
18 noHodiya, noHashum, noBhetsayi,
19 noHarifi, noAnatoti, noNebhayi,
20 noMagepihashe, noMeshulam, noHezire,
21 noMeshezabheli, noTsadoki, noYaduwa,
22 noPelatiya, noHanan, noAnaya,
23 noHosheya, noHananiya, noHashubhi,
24 noHaloheshe, noPileha, noShobheki,
25 noRehum, noHashabena, noMahaseya,
26 noAhiya, noHanan, noAnan,
27 noMaluki, noHarim, noBhahana.
28 Abanye abantu, ababingeleli, nabaLevi, nabamasango, neemvumi, nabakhonzi betempile, nabo bonke ababezahlule kwizizwe zamazwe, beza emyalelweni kaThixo; abafazi babo, noonyana babo, neentombi zabo, bonke abasebenokwazi nokuqonda.
29 Babambelela kubazalwana babo, iingangamsha zabo, bangena esiqalekisweni nasesifungweni sokuhamba ngomyalelo kaThixo, owawiswa ngesandla sikaMoses umkhonzi kaThixo, nokuyigcina nokuyenza yonke imithetho kaYehova iNkosi yethu, namasiko akhe, nemimiselo yakhe:
30 singazendiseli iintombi zethu kwizizwe zeli lizwe, singabazekeli oonyana bethu iintombi zazo;
31 sithi izizwe zeli lizwe ezizisa izinto zentengo, nengqolowa, nokuba yiyiphi, ngemini yesabatha, zithengisa, singathengi kuzo ngesabatha nangomhla ongcwele; siwuyeke ulale umnyaka wesixhenxe, nento ebolekiweyo sisandla nokuba sesikabani.
32 Sizimisele imithetho yokubeka phezu kwethu isahlulo sesithathu seshekele ngomnyaka, ngenxa yenkonzo yendlu kaThixo wethu:
33 ngenxa yezonka ezicwangcisiweyo, nomnikelo wokudla wamaxesha onke, nangenxa yedini elinyukayo lamaxesha onke, nelesabatha, nelokuthwasa kwenyanga, nangenxa yamaxesha amisiweyo, nangenxa yezinto ezingcwele, nangenxa yamadini ezono okucamagushela amaSirayeli, nomsebenzi wonke wendlu kaThixo wethu.
34 Sibawisele amaqashiso ngomsondezo weenkuni ababingeleli, nabaLevi, nabantu, ukuba ziziswe endlwini kaThixo wethu, ngokwezindlu zethu zooyise, ngamaxesha amisiweyo, iminyaka ngeminyaka, ukuba zibaswe esibingelelweni sikaYehova uThixo wethu, ngoko kubhaliweyo emyalelweni;
35 sizise iintlahlela zomhlaba wethu, neentlahlela zeziqhamo zonke zemithi yonke, iminyaka ngeminyaka, endlwini kaYehova;
36 nabamazibulo koonyana bethu nawemfuyo yethu, ngoko kubhaliweyo emyalelweni, namazibulo eenkomo zethu, nawempahla emfutshane, siwazise endlwini kaThixo wethu, kubabingeleli abalungiselelayo endlwini kaThixo wethu;
37 neentlahlela zemigrayo yethu, nemirhumo yethu, neziqhamo zemithi yonke, iwayini entsha, neoli, sizizise kubabingeleli emagumbini endlu kaThixo wethu; nezishumi zemihlaba yethu kubaLevi; bona abaLevi bazamkele izishumi emizini yonke esilima kuyo.
38 Umbingeleli unyana ka-Aron aze abekho nabaLevi, ekuzamkeleni kwabaLevi izishumi; bazinyuse abaLevi izishumi zezishumi ezo, bazizise endlwini kaThixo wethu, emagumbini endlu yobuncwane;
39 ngokuba oonyana bakaSirayeli noonyana bakaLevi baya kuzisa umrhumo wengqolowa, newayini entsha, neoli, emagumbini apho zikhona iimpahla ezingcwele, nababingeleli abalungiselelayo, nabamasango, neemvumi; indlu kaThixo wethu singayishiyi.